Ukudonsa kwemisipha: kuyini nokuthi ungayenza kanjani | Bezzia
Ukudonsa kwemisipha: kuyini nokuthi kufanele ukwenze kanjani
UToñy Torres | | Amathiphu ezempilo, Ukuzivocavoca
Ukudonswa kwemisipha, noma okubizwa nangokuthi uhlobo lwemisipha, kwenzeka lapho kukhona ukulayishwa ngokweqile emisipheni. Lokhu kunwetshiwe kakhulu futhi kungaphula imicu ethile yemisipha, yonke imisipha noma imisipha uqobo lapho kwenzeke khona ukulimala. Lolu hlobo lokulimala luvame kakhulu kubantu abadlala imidlalo, kubantu abalungiselela umncintiswano nabasubathi abasezingeni eliphezulu.
Kodwa-ke, noma ngubani angahlushwa yimisipha ngesikhathi lapho imisipha yomzimba ingaphansi kwengcindezi enkulu. Futhi kuvamile kwabadala, ikakhulukazi kulabo abenza ukunyakaza okuphindaphindiwe futhi abahlala behlushwa ezinye izinkinga zemisipha ezifana ne-tendinitis. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungakuthola kanjani futhi wenze ngokukhipha imisipha? Sizokutshela ke.
1 Izimpawu zemisipha edonswayo
2 Indlela yokwenza
Izimpawu zemisipha edonswayo
Uphawu olucacile lomsipha odonswayo ubuhlungu obukhulu obukhiqizayo ukulimala, imvamisa itholakala eduze kwamalunga ezingalweni nasemilenzeni. Lokhu kulimala kungenzeka ngemuva kokushaywa, ngenkathi kugijinywa noma ngemuva kweseshini yoqeqesho ebanga kakhulu. Ngaphezu kobuhlungu obukhulu, umuntu ophethwe yimisipha edonswayo uzoba nobunzima bokuhamba noma ukuhambisa ingalo, kuya ngokuthi ukulimala kwenzeka kuphi.
Ngaphezu kobuhlungu nobunzima bokuhambisa isitho lapho ukudonswa kwemisipha kwenzeke khona, i-hematoma ingavela endaweni, uphawu olucacile lokuthi kukhona ukuphuka kwe-fiber ezimweni ezimbalwa noma kwemisipha ethintekile ezimweni ezibucayi kakhulu. Kuzokwenzeka futhi ukuvuvukala nendawo izokuzwa ifudumele ukwedlula wonke umzimba.
Ngokuya ngohlobo lokulimala, Ubukhali buhlukaniswa baba amamaki amathathu:
Ibanga 1. Izinga lokuqala noma elincane, kulapho ukulimala kwenzeka lapho imicu yemisipha iyelula kepha akukho ukuphuka. Lokhu kulimala kuthatha cishe isonto ukuba lehle, kubuhlungu kodwa ngezinga elincane.
Ibanga 2. Kulokhu ukulimala kunesilinganiso futhi kukhona ukulimala noma ukucwiliswa kwemicu yemisipha noma kuthenda. Ngokuvamile, ubuhlungu bukhulu kakhulu futhi buhlala isikhathi eside, futhi bungahlala phakathi kweviki elingu-1 nele-3.
Ibanga lesithathu. Ukulimala kanzima nge imisipha ephelele noma ithenda yezinyembezi. Ubuhlungu bukhulu kakhulu, kukhona ukulimaza, ukuvuvukala kanye nokushintsha kwezinga lokushisa endaweni lapho ukulimala khona.
Uma usola ukuthi kungenzeka uke wahlushwa yimisipha, kufanele yeka ukuvivinya umzimba uye ezinsizakalweni zezokwelapha ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ukuze unqume ubukhulu bengozi, kuzodingeka ukuthi wenze okungenani i-X-ray eyodwa, ngaphezu kwezivivinyo ongazidinga uchwepheshe ngaleso sikhathi.
Okwamanje lapho kwenzeka khona ukulimala futhi kuvela izimpawu zokuqala zokudonsa kwemisipha, amakhaza kufanele asetshenziswe ngokushesha, kungaba ngokucindezela okubandayo noma ngeqhwa. Gwema ukwenza ukunyakaza okungazelelwe futhi ungabukeli phansi ubuhlungu. Ukulimala kungaba kubi kakhulu kunalokho okungabonakala ekuqaleni, ngoba ezimweni ezinzima kakhulu, ukusabela komzimba ngesimo sokuvuvukala kukuvimbela ekuzweni ubuhlungu bangempela bokuqhekeka kwemicu noma imisipha uqobo.
Ukwelashwa kwemisipha edonswayo kuzoncika ebukhulwini bento efanayo nezinga lokulimala. Ngokuvamile, okunconywayo ukuphumula, futhi ukufaka amakhaza endaweni lapho ukudonswa kwemisipha kwenzeke khona. Ungathatha futhi ama-anti-inflammatories ngobuhlungu, noma kunjalo kuzoba ngudokotela obeka okufanele kakhulu kuwe ngokwezidingo.
Ngisho nasezimweni ezinzima kakhulu zokulimala, udokotela angancoma ezinye izikhathi zokwelashwa zokwelapha ukulimala ngokuphelele nokuthi isiguli singabuyela ekuhambeni nasekusebenzeni kwansuku zonke. Khumbula ukuthi ukulimala kabi kwemisipha kungenza ukutakula kube isikhathi eside futhi kube buhlungu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kungadala okunye ukulimala kobukhulu obuhlukahlukene ukuthi buvele.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukuzivocavoca » Ukudonsa kwemisipha: kuyini nokuthi kufanele ukwenze kanjani
Izitayela zasehlobo ezinamabhulukwe welineni
Ikhekhe le-oatmeal eline-apula nesinamoni